Immaculate Conception – 2trondro
Home / Fiangonana / Mary / Immaculate Conception
... Maria, tsy i Jesosy!
Olona marobe, anisan'izany ny Katolika maro, mirona ho diso ny Immaculate Conception noho ny torontoronina 'i Jesoa tao an-kibon'i Maria.
Na izany aza, ny "Immaculate Conception" dia manondro ny torontoronina Maria, tsy Jesosy.
Ny Eglizy Katolika milaza fa i Maria nandova–fa noho ny fahasoavana manokana avy amin'Andriamanitra, izy "niaro afaka amin'ny olona rehetra tany am-boalohany pentina ny fahotana" hatramin'ny fotoana voalohany azy misy (Pope Pie IX, tsy hay ambara Andriamanitra). Tsy loatra ny ilaina fepetra tahaka ny mety amin'ny fanazavana ny azy tsy manam-paharoa antso mba hitondra ny Zanak 'Andriamanitra. Noho izany, hitantsika Mary tahaka ny New Eva ary Vata Fanekem-pihavanana Vaovao.
Amin'ny niteraka an'i Jesosy, Mary nanao izay tsy misy zavaboary hafa mbola nanao. Izy "nitondra ny Zanaka,"Nanoratra Saint Clare d'Assise (D. 1253), "Iza ny lanitra dia tsy omby; nefa izy nitondra azy tamin'ny kely fefy ny azy kibo masina, ary nihazona azy teo am-pofoany ny virjiny " (Fahatelo Taratasy ho Sambatra Agnes an'i Prague).
Mety Andriamanitra nifidy ny mpanota mba ho renin'ny Zanany? Eny, raha toa izy ka naniry, Afaka. Fa izany ihany no mety fa nifidy indrindra-ny virijina madio.
indrindra, ny Immaculate Conception mampianatra antsika momba an'i Jesosy, nilaza tahaka izao ny tsy takatry ny saina masina. Tokoa, Mary ny fahamasinan'i manondro mivantana ho amin'ny fahamasinana ny zanany, izay ka masina fa tsy misy afaka fotsiny sary an-tsaina Azy natao ny nofo ota.
Ny hafa matetika fihetsiketsehana fa ny Immaculate Conception dia tsy hita ao amin'ny Baiboly.
Marina fa ny andian-teny, "Immaculate fotoana nampitsaika,"Tsy hita ao amin'ny Baiboly, ary marina ihany koa fa na aiza na aiza ny Baiboly dia milaza, "Mary mbola torontoronina tsy nanota." Saingy avy eo, ny teny hoe "Trinite Masina" dia tsy hita ao amin'ny Baiboly, na. Sady tsy ny Baiboly fanjakana, "Misy Andriamanitra marina iray, ahitana ny telo mpiara-olona mandrakizay. "1
Na izany aza, ny fotopampianaran 'ny Immaculate Conception dia azo aseho ho azo itokiana ny fampianarana ara-baiboly.
Mary ny sinlessness dia mafy inferred, ohatra, ao amin'ny fahafaham-baraka ny menarana Genesisy 3:15, "Dia hampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy, ary ny taranakao sy ny taranany; izy hanorotoro ny lohanao, ary ianao kosa hanorotoro ny ombelahin-tongony. "Eto ny fandaharan'Andriamanitra no nambara ho lavo indray ny olona ny fifandraisana amin'Andriamanitra, nentiny teo amin'ny Adama sy Eva ny fandikan-dalàna. Araka izany drafitra, ny vehivavy sy ny taranany dia tokony hatao afa-tsy ny sisa Adama sy Eva ny lavo taranak'i-mba ho vita fanefitra ny ozon'ny fahotana tany am-boalohany, izay dia manafoana. Ny famelan-tsazy ny vehivavy sy ny taranany no dikan'ny ny "fandrafiana", izay Mampanantena Andriamanitra fa hametraka eo amin'izy ireo sy ny menarana sy ny taranany ny menarana, na amin'ny teny hafa teo amin'izy ireo sy ny fahotana.
Ary ny taranak'ilay vehivavy, mazava ho azy, dia i Jesosy. Ny vehivavy dia adika an'ohatra ho amin'i Ziona zanakavavy, mariky Jerosalema (jereo Isaia 37:22). Fa, ao amin'ny ara-bakiteny, Christological hevitra, mazava ho azy, izy koa dia tsy maintsy ho ny Virjiny Mary, ny mpitondra ny Mpanavotra.
Nanome voninahitra ny Kristianina fahiny ny niavaka sy tsy manam-paharoa fahamasinan'ny Maria Virjiny, izay niresaka momba mandrakariva akaiky amin'ny fahamasinan'ny Zanany. Ohatra, in ny 170, Saint i Méliton avy any Sardisy hoy Jesosy, ny tsy misy pentina Zanak'ondry, "Teraka ny Mary, ny ara-drariny Ewe,"Midika ny spotlessness ihany koa (Easter toriteny).
Saint Hippolyte ny Roma (D. 235) antsoina azy hoe "ilay tsy misy pentina sy Andriamanitra-jaza Mary;"Ary, mampitaha azy amin'ny hazo nampiasaina mba hanorina ny Fiaran'ny Fanekena, hoe ny "tsy mety simba" (Lahateny momba ny Faran'izao Tontolo Izao 1; Fanehoan-kevitra ao amin'ny Salamo 22; Theodoret ny Cyr, voalohany Dialogue).
The eo ambanin 'ny, vavaka mampiaraka avy amin'ny tapaky ny taonjato fahatelo, miantso Maria "irery ihany no madio sy irery voatahy." Saint Efraima Syriana (D. 373) Hoy Kristy, "Ianao irery ihany sy ny reninao dia tsara tarehy kokoa noho ny olon-kafa; Fa tsy misy tsiny anao, na stains eo ny reninao " (The Nisibene Fihirana sy Hiran'ny Ankizy 27:8).
Saint Ambrose ny Milan (D. 397) antsoina hoe ny Lady "a Virgin tsy vitan'ny hoe tsy misy loto fa virijina fahasoavana izay efa nanao tsy azo dikaina, maimaim-poana ny rehetra loton'ny fahotana " (Fanehoan-kevitra ao amin'ny Salamo 118 22:30).
Nilaza fa ny lehilahy sy ny vehivavy masina ao amin'ny Baiboly, na dia eo aza ny fivavahana lehibe, mpanota, Saint Augustin avy any Hippone (D. 430) nanao afa for Maria, "Ny aminy, noho ny voninahitry ny Tompo, Te-hanana tsy fanontaniana mihitsy, rehefa mandray ny fahotana,-for ahoana no ahafantarantsika inona no haben'ny fahasoavana ho amin'ny tanteraka fandresena ny ota dia omena aminy, izay mendrika ny hitoe-jaza ka hiteraka azy izay tsy nisy ota?" (Nature ary Grace 36:42).
Ny sasany amin'ireo mpanoratra Fiangonana fahiny no mamela ny mety fa efa nanota Mary. Tertullien sy Origène no voalohany mba nanambady an'i io fomba fijery an-tsoratra (cf. Tertullien, Ny nofon'ny Kristy 7; Manohitra ny Marcion 4; loharano, Homilies ao amin'ny Lioka 17).
Fijery avy amin'ny fampakaram-bady tao Kanana
Misy koa vongana Saint Irénée ao amin'ny Tertullien ary i Origène noho ny fanehoan-kevitra momba azy amin'ny fampakaram-bady tao Kanà (John 2:1). Nanoratra izy hoe fa Mary, "Maniry alohan'ny fotoana mba handray ny kapoaky ny emblematic manan-danja,"Dia" maso(edisiona)"Jesosy ho azy" faingana tonga volana " (fitokoana 3:16:7). Na izany aza, ny milaza fa nino i Maria Irénée efa nanota dia ho sahisahy. Irénée dia tsy midika ho ratsy fitondran-tena antony tao amin'ny ampahany na ny fitondran-tena hanohitra an'Andriamanitra. Raha ny antony in te hahita Zanany nambara amin'izao tontolo izao dia tia Azy, Avy eo ny "faingana" dia diso lalana, fa tsy mpanota. (Mifanohitra amin'izany kosa, ao amin'ny Toriteny ao amin'ny Jaona 21:2, Saint Jean Chrysostome hevitra ny antony Maria dia zava-poana, izay, tokoa, ho mpanota.)
Azo antoka, Mary ny tonga lafatra masina dia tsy midika fa izy nahatakatra tanteraka ny zanany, fa nankatò tanteraka izy Azy sy ny Rainy, ary hitantsika izany ao amin'ny Kanà, indrindra (jereo ny Jaona 2:5).
Momba ny "zotom-po,"Severus avy any Antiokia (D. 538) nanamarika, "Izy no tsy hanalavitra ny tenany aminy, na handao, ao ny fanaon'ny olona iray izay efa nahazo anatra; izy ary tsy mangina, fibebahana ny zotom-po, toy ny mitranga amin'ny olona izay efa dia nomelohin'i " (toriteny 199).
Miady hevitra eo Katolika
Na dia eo aza ny heterodox sata, ireo mpanoratra sasany nanao fitaizana ny hevitra teolojika ny taranaka tatỳ aoriana. Origène ny hery mitarika indrindra dia nalaza teo amin'ny Rain'ny ny Atsinanana, Olo-masina Basil Lehibe (D. 379), Jean Chrysostome (D. 407), Cyrille avy any Aleksandria (D. 444), ary ny olon-kafa.
Anti-be Katolika no nanao izany zava-misy,fa ny marina no azo atao foana ny mpino mba hanontany ny fampianarana izay tsy mbola nisy hentitra voafaritra.2
Papa Sixtus IV nanamafy toy ny tara toy ny 1483 fa momba ny Immaculate Conception, dia azo atao ho an'ny Katolika na ny manaiky na mandà izany fampianarana izany "ny raharaha satria tsy mbola nanapa-kevitra mbola avy ny Romanina Fiangonana sy ny Foibem-pitondrana apôstôlika" (mavesatra loatra).
Toy izany koa ny tamin'ny andron'i 'ny Apôstôly. Ny hoe "nisy adihevitra be" anisan'ireo nivory tao amin'ny Filan-kevitry Jerosalema manaporofo tsy fitovian-kevitra nisy teo amin'ny Fiangonana ambaratongam-pahefana eo amin'ny olana lehibe iray (jereo ny Asan'ny Apostoly, 15:7).
Raha vao ny raharaha efa nanapa-kevitra, na izany aza, nitsahatra adihevitra rehetra ka tsy hihoatra fisaraham-bazana nisy nandefitra (jereo 15:12, 28). Koa, raha ny sasany ny raim-pianakaviana tany am-boalohany ny sinlessness nanda Mary, ny toerana dia lavitra avy niarahana niombon-kevitra. Maro ny Rain'ny nanamafy ny impeccable masina, araka ny fihetsiketsehana ao amin'ny asa soratry ny dokotera toy ny Olomasina Athanase, Ambrose, Augustin, ary ny olon-kafa. Ny finoana ny sinlessness Mary nisy tao amin'ny Fiangonana tany am-boalohany, tany Atsinanana sy any Andrefana; sy ara-potoana ny finoana fa efa tsy nanao fahotana na inona na inona mandritra ny androm-piainany voasolon'ny fivavahana ny hevitra rehetra ho ny mifanohitra.
Ao Tsara ihany ny manamarika fa tsy misy na inona na inona ao amin'ny Fiangonana ny fampianarana izay milaza fa nandritra ny formative dingana ny foto-pinoana ara-drariny ireo izay mino dia ho avy hatrany ny fandresena na mahita ny tenany ao amin'ny maro an'isa. Raiso ny ohatry ny Fiangonana ny ady miaraka amin'ny mpanara-dia an'i Arius, izay nandà ny maha-Andriamanitra an'i Kristy. José Orlandis mitantara ny fomba Arius 'nivadi-pinoana dia tsy hanjavona ny akaiky ny Filan-kevitry ny Nicée fa nitombo amin'ny fitarihana ny fotoana fa "nijery toy ny hoe handeha Arianisma ny handresy. Ny tena niavaka ny Nicée-Constantinople eveka no natao sesitany sy, araka ny St Jerome-tsipiriany ny nataony, 'Izao tontolo izao dia nisento ka hita ho any amin'ny gaga fa lasa momba ny Arianisma' " (A Short History of the Eglizy Katolika, Efatra Fitsarana Press Limited, t. 39; Jerome, Fifanakalozan-kevitra eo amin'ny Luciferian sy ortodoksa Kristianina 19).
Ny manam-pahaizana no nanontany raha toa ny raim-pianakaviana izay nilaza ny Virjiny masina tokoa ny nino izy dia afaka amin'ny fahotana tany am-boalohany ary koa fahotana manokana. Ny kevitra natanjaka indrindra ny fotoana, amin'ny kely indrindra amin'ny West, dia fa ny fahotan'i Adama sy Eva nampitaina tamin'ny ray aman-dreniny avy amin'ny olona iray amin'ny alalan'ny fanirian-dratsy ao amin'ny firaisana. Izany dia midika fa i Jesosy irery ihany, izay ihany no torontoronina tsy firaisana, afaka afa-nandositra ny fahotana tany am-boalohany. Na inona na inona ny fomba fahotana tany am-boalohany dia mifindra, na izany aza, ny zava-misy fa ny ankoatra mbola mety tsy maintsy natao tao Maria ny raharaha ho azy ny efa voatsimbina avy amin'izany. Augustine mazava tsara fa ny miavaka natao ho azy (ary ho azy irery ihany), na dia tsy manazava rahoviana ary Ahoana izany no nitranga (jereo Nature ary Grace 36:42, ambony).
Ny Immaculate Conception tsy hentitra voafaritra mandra-pahatongan'ny antenatenan'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo. Tokony azo lazaina amin'ny fomba fampitahana, na izany aza, fa ny maha-Andriamanitra an'i Kristy dia tsy hentitra voafaritra mandra- 325 (Filan-kevitry ny Nicée); ny maha-Andriamanitra ny Fanahy Masina, 381 (Filan-kevitry ny Constantinople); ny fomba aman-toetra roa ao amin'i Kristy, 451 (Filan-kevitry ny Chalcédoine); ny roa Wills ao amin'i Kristy, 681 (Fahatelo Filan-kevitry ny Constantinople); ary ny Canon ny Baiboly, 1441 (Filan-kevitry ny Florence). Tsirairay avy ireo fampianarana ireo, tahaka ny Immaculate fotoana nampitsaika, foana no nino 'ny Fiangonana, na dia tsy nilaza tamin'ny fomba ofisialy raha tsy efa lasa ilaina (na mahasoa) hanao izany. Ankoatra ny iray somary vitsivitsy olona nandritra ny roa arivo taona, Mary ny sinlessness mihitsy ao amin'ny fisalasalana. Teo ihany ny fanontaniana ny rahoviana ary Ahoana Andriamanitra dia nitondra momba izany fahagagana izay nitondra ela mba hamahana.
Na dia ny lehibe rehetra ny ahiahy momba ny Immaculate Conception efa ampy niantso ny faramparan'ny Moyen Âge, ny mitompo teny fantatra fa tsy ho tonga famaritana ny taonjato maro. Ny mahazatra tosika ny fanambarana dia mitompo teny fantatra fa ilaina ny hanoherana pinoana nahazatra fampianarana mampidi-doza ny firaiketan'ny ny mpino. Zavatra tsy ny nitranga tamin'ny Immaculate fotoana nampitsaika, na izany aza, toy ny fifanarahana rehetra izao Efa ela tany aloha no tonga ao amin'ny fo sy ny sain'ny ny mpino. Na izany aza, Tsapan'izy ny fitondran-tena sy ara-panahy ny kolikoly fa Modernism ho sanatria amin'ny fiaraha-monina, ny Fiangonana ny tapaky ny taonjato fahasivy ambin'ny folo nahita ny fampiroboroboana ny tonga lafatra masina ny Renin'Andriamanitra 'Andriamanitra ho tsy miangatra mahasoa ny Kristianina.
Mpanao tsikera ao amin'ny Immaculate Conception no fotoana sasany mitanisa andinin-manokana izay toa mampihena ny madio mangalahala Maria fahamasinana. Iray toy izany andininy izany Luke 8:21, izay, eo rehefa nilaza fa ny reniny sy ny rahalahiny hizaha Azy, Jesosy fanamarihana, "Ny reniko sy ny rahalahiko dia izay mandre ny tenin'Andriamanitra ka mankatò azy." Saint Ambroise hoy ny amin'io andininy io, "Ny Reny dia tsy nandà-tahaka ny mpivadi-pinoana sasany dia noforonina tamin-kafetsena ho avy-fa izy no niaiky na dia hiala amin'ny hazo fijaliana (jereo John 19:26-27). kosa, safidin'ny ny fifandraisana ny nofo dia nomena ny karazana fifandraisana izay voalaza avy any ambony " (Fanazavana ny Filazantsaran'i Lioka 6:38).
Ao amin'ny andalan-teny koa, hita ao amin'ny toko fahiraika ambin'ny folo an'i Luke, nisy vehivavy anankiray teo afovoan'ny vahoaka miantso an'i Jesosy, "Sambatra ny kibo izay nitondra Anao, ary ny nono izay ninonoanao ianao!"; ny izay mamaly, "Sambatra kosa dia izay mandre ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany!" (11:27-28). ireo teny ireo, anefa, dia mivantana momba an'i Maria.
Vao maraina amin'izany Filazantsara, Elizabeth milaza azy, "Isaorana anie izy izay nino fa ho tanteraka ny zava-niteny ho azy avy amin'ny Tompo" (Luke 1:45). Hoy koa izy, "Sambatra ianao amin'ny vehivavy, ary voatahy ny hateraky ny kibonao!" (1:42). Ary Mary ny tenany nihiaka hoe, "Indro, hatramin'izao taranaka rehetra ho sambatra aho " (1:48). Jesosy, avy eo, Tsy niady hevitra ny Reny ny fahasambarana, fa manazava ny antony izy no tena voatahy: ny fankatoavana ny Tenin'Andriamanitra. Noho izany, in roa Luke 8:21 ary 11:28, manonona ny reniny Mandrisika ny Tompo mba hidera ireo izay mihaino sy mitandrina ny Tenin'Andriamanitra.
Original tsy fisian'ny fahotana
Angamba ny andinin-Baiboly izay tsy Katolika mino mivantana indrindra nolaviny ny Immaculate Conception dia ao amin'ny Saint Paul ny Taratasiny ho an'ny Romanina 3:23, "Samy efa nanota ny rehetra ka tsy mahatratra ny voninahitr'Andriamanitra" (jereo Jaona Voalohany Letter, 1:8 & 10, koa).
Izy ireo mandika izany fanambarana ankapobeny momba ny olombelona amin'ny heviny tanteraka ny hoe ny olona tsirairay efa nanota. Nefa inona no ny olona toy ny ankizy madinika sy ny marary ara-tsaina, izay tsy mahavita ny manota? Mary no fotsiny afa hafa.
Inona no tena mila atao mazava tsara dia hoe Maria ny fanamasinana tsy tonga afa-tsy ny Fanavotana. To ny mifanohitra, izy koa tonga teo ambany ozon'ny ota tany am-boalohany, na izy voatsimbina avy ny handova amin'ny alalan'ny ny tsehatra. Ny fomba hafa koa izany, dia izy efa invulnerable ny ota tany am-boalohany ny maha-toy ny zanany ihany no-dia ny Immaculate Conception, Tsehatra ny manokana azy ho an'ny, tsy ho ilaina.
Mary ny tenany manamafy azy fa mila ny Mpamonjy ao amin'ny Lioka 1:47. tsy hay ambara Andriamanitra toy izany koa mazava tsara fa izy no narovana ny tasy ny fahotana tany am-boalohany "amin'ny alalan'ny fahasoavana sy ny tombontsoa iombonana omena amin'ny alalan'ny Andriamanitra Tsitoha, Rehefa heverina ny fahamendrehan 'i Jesoa Kristy, ny Mpamonjy ny olombelona " (nampiana fanamafisana). Ao Maria ny raharaha ny fahamendrehan 'i Kalvary no ampiharina mialoha ny fotoana, izany hoe, in mialoha ny zanany maty. Andriamanitra namonjy ny sisa ny olombelona amin'ny alalan'ny manangana azy taorian'ny efa nahazo; Namonjy Maria amin'ny alalan'ny manakana azy tsy hianjera eo amin'ny toerana voalohany. Ny fomba miavaka izay voavonjy izy nanao Mary more, tsy latsaka, no ananan'Andriamanitra trosa, noho ny sisa ny olombelona.
Indraindray, in miresaka momba ny Immaculate Conception, ny fanontaniana ny sa tsia i Maria niaritra fahoriana raha miteraka atsangana. Misy finoana tranainy fa izy no hanafaka ny Kristy tokoa Ankizy tsy misy fanaintainana, midika izy avy Eva nisy tsy nampandrenesiny ny sazy sy ny fandikan-dalàna (jereo Genesisy 3:16).
Mandritra izany fotoana izany, azo atao ny sary an-tsaina i Maria niaritra asa fanaintainana na dia eo aza ny azy sinlessness. Diniho ny mifandray amin'ny fanontaniana na tsia izy voajanahary nandalo fahafatesana, koa ny ampahany amin'ny Adama sy i Eva ny sazy (jereo Genesisy 3:19 na Paoly Taratasiny ho an'ny Romanina 6:23). Ny malalaka ny marimaritra iraisana eo amin'ny teolojianina katolika dia ny hoe maty tokoa i Maria, mba tanteraka hanaraka ny Zanany. Raha tsy mbola afa-bela amin'ny fahafatesana, dia manaraka dia mety tsy efa afahana amin'ny hafa karazana fijaliana noho ny antony mitovy. Ny fahamarinan 'ny Immaculate fotoana nampitsaika, noho izany, tsy miankina amin 'ny raharaha ny nahaterahan'i Maria fanaintainana na ny tsy fisian'izany.
Tsy azo mba handaminana ny zava-miafina ny amin'ny Virjiny ny lahateny avy amin'ny Soratra Masina irery ihany no. Isaia 66:7 firenena, "Fony mbola tsy tao asa izy niteraka; Fony mbola tsy tonga teo aminy ny fanaintainana dia natolotra ny zazalahy. "Irénée, iray, nandray izany ho porofo Mary efa nanafaka tsy miteraka (Apostolika Fitoriana 54).
Etsy ankilany, ny Bokin'ny Apokalypsy, 12:2, Hoy ny vehivavy "niantso mihetsi-jaza Teraka, in fitaintainany noho fanaterana. "Toy ny Vehivavy ao Genesisy 3:15, Katolika mirona ho mandika ny vehivavy ao amin'ny Apokalypsy 12 ao amin'ny tena heviny ho Mary. Tsy azo anaovana ny fahaterahana ho azon'ny fanaintainana an'ohatra, na izany aza. Misy milaza ny fanaintainana Mary maneho ny fahoriany, tsy avy amin'ny ara-batana ny Mpamonjy teraka tany Betlehema, fa avy amin'ny ara-panahy ny Fiangonana teraka tao Kalvary (cf. Pope Pius X, Ad Diem ill; John 19:26-27) izay izy dia nijery ireo zanany maty.
Ny iray voalohany tsy ara-baiboly miresaka momba an'i Maria ny fahafahana amin'ny fanaintainana raha miteraka no hita ao amin'ny soratra apokrifa iray antsoina hoe Ny Protoevangelium Jakoba, izay azo inoana fa ahitana manodidina ny antenatenan'ny taonjato faharoa. Noho io asa io ny zava-misy famaritana ny nahaterahan'i Jesosy, manamafy ny maha-batana ny Fahatongavana ho nofo (izay mifanohitra amin'ny Ny Fiakarana Isaia, ohatra, izay Mary dia tsy mahalala tanteraka ny lahateny), dia nihevitra fa Ny Protoevangelium Jakoba nosoratana hiadiana gnostique Docetism, izay foana ny vatan'i Kristy, dia ny nofinofy. Ireo izay avy hatrany tsy hieritreretantsika hoe ny asa soratra apokrifa, satria tsy izy ireo andinin-teny ara-tsindrimandry tokony mba handinika fa Saint Jude manao toy izany momba ny roa asa, Eritreretina Mosesy ary voalohany i Enoka, ao amin'ny New Testament taratasy (jereo Joda 1:9, 14).
Na dia tsy misy dikany toy ny loharanom-teolojia, ny Apokrifa no manome vavolombelona amin'ny hevitra ara-pivavahana izay fahita amin'ny Kristianina tamin'ny taonjato voalohany. Matetika izy ireo voasoratra manodidina ny zavatra inoan'ny Kristianina Ortodoksa, raha ny tena izy, izay tsy mbola nisy tanteraka voafaritry ny Fiangonana. Maro ny zavatra inoana momba ny Virjiny dia voakambana toy izany ny sasany kaonty-marina, ny sasany tsy, ny sasany avy amin'ny Soratra Masina sy ny Lovantsofina Masina, ny sasany avy amin'ny sain'ny mpivadi-pinoana. Mary ny fahalalahana amin'ny asa fanaintainana, koa, dia voamarin'ny ortodoksa tany am-boalohany mpanoratra ny fakan-tahaka toa an'i Irénée sy Clément avy any Aleksandria. Ny tena zava-misy fa ny hanala lahateny no noresahin'i mpino ny samihafa fiaviana sy ny fitaoman-Ortodoksa sy heterodox-kevitra ny hevitra talohan'ny ny asa soratra; fa tsy nanonofy niakatra avy amin'ny vondrona tatỳ aoriana, fa nampianatra ny Apôstôly.
Hamantatra ny fampianarana momba ny Andriamanitra telo izay iray avy amin'ny Soratra Masina, Kristianina maintsy mampitaha sy hampifandray fampianarana Baiboly isan-karazany, toy ny Isaia 44:6, "Izaho no voalohany, ary Izaho no farany; afa-tsy Izaho tsy misy andriamanitra;"amin'ny Matthew 28:19: "Koa mandehana àry, ataovy mpianatra ny firenena rehetra, ka ataovy batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. " ↩
Raha vao ny fampianarana efa natsangana ny haavon'ny ny teny finoana fisalasalana eo amin'ny mpino dia tsy azo atao. Ny ohatra ara-tantara ny Saint nandeha hamely an'i izany fitsipika izany mety ho ny an'i Andrew Kreta, izay, amin'ny Monothelite Synoda an'i Constantinople in 712, nandà misy sitraponareo roa teo imason'i Kristy, na dia efa hentitra izany voafaritra tao amin'ny Filan-kevitry ny Constantinople Fahatelo in 681. Tonga saina ny fahadisoany, dia recanted herintaona tatỳ aoriana, ary nanao fiekem-pinoana an'i Monothelitism sy ny hafa fitokoana. ↩